Kaarka oggolaanshaha daganaanshaha - Migrationsverket
Uppehållstillståndskort – somaliska
Haddii lagu siiyay oggolaanshaha daganaanshaha waxaad sidoo kale heleysaa kaarka oggolaanshaha daganaanshaha sida cadeynta in laguu ogolaaday in aad ku noolaatid Sweden. Kaarka wuxuu leeyahay jibka-kumbiyuutarka ee wata farahaaga iyo sawirkaaga. Waxaad marwalba u baahantahay in aad wadatid kaarkaaga oggolaanshaha ogolaanshaha marka aad aadeysid wakaaladaha dowlada ama adeegyada daryeelka caafimaadka.
Lagaa qaaday sawirkaaga iyo farahaaga lagaa qaaday
Qof walba ee helayo kaarka ruqsada daganaanshaha waa in la sawiraa. Carruurta ka hooseeya da'da lix looma baahno in laga qaado farahooda. Qof walba aan fara laga qaadi karin sabab la xiriirto sababaha jirka, sida dhaawacyada faraha oo joogta ah, looma baahno in farahooda la qaado.
Farahaaga iyo sawirka waxaa kaliya oo lagu keydiyaa jibka-kaarka, ama ahanmeel kale. Sababta ah in markale lagu sawiro, iyo farahaaga markale la qaado, waqti walba ee aad u baahantahay kaar cusub oo oggolaanshaha daganaansho ah in laguu sameeyo. Ma jiraan waa dalacaad kharash ah sameynta kaararka oggolaanshaha ah aan ka aheyn qidmada codsiga ruqsada.
Haddii aad joogtid meel kabaxsan Sweden
Haddii aad u baahantahay fiiso aad ugu safartid Sweden waa in aad booqataa safaarada Swedish ama qunsulka guud si markaas laguu sawrio oo farahaago lagaaga qaado. Akhriso bogga internetka inta aanad booqan kahor safaaradda ama qunsuliyada.
Wadamada ee muwaadanniintooda u baahan fiiso ay ugu safraan Sweden (oo af ingiriis) External link, opens in new window.
Hel safaarada ama qunsulka guud ee kuu dhow adiga Swedenabroad.se (oo af ingiriis) External link, opens in new window.
Haddii aadan u baahneyn fiiso aad ugu safartid Sweden, waxaa sawir iyo faro lagaa qaadayaa Sweden. Waa in aad booqataaWakaalada Socdaalka sida ugu dhaqsiha badan oo suurtogallka ah kadib markaad heshid oggolaanshaha daganaanshaha iyo imaanshaha Sweden.
Haddii aad joogtid Sweden
Haddii aad doonayso inaad sharciga ruqsada ee aad wadanka Iswiidhan ku leedahay aad dheeraysato ama haddii aad adigu u baahan tahay kaarka ruqsada sharciga deggenaanshaha waxaad booqasho ugu tegeysaa Hey’adda laanta socdaalka si markaa sawir iyo faraba lagaaga qaado (fingeravtryck). Arrintani waxay xitaa khuseysaa qofka wadanka Iswiidhan gabaad ka codsanaya qofkaas oo aan wax ruqsad ama oggolaansho halkan ku lahayn.
Marka aad adigu soo booqanayso Hey’adda laanta socdaalka waxaad soo qaadanaysaa baasaboorkaaga. Markuu laguu diyaariyo kaarka ruqsada sharciga deggenaanshaha waxa markaa laguugu soo dirayaa cinwaanka aad k deggen tahay wadanka Iswiidhan. Sidaas daraadeed ayey muhiim u tahay inaad cinwaanka aad wadanka Iswiidhan ka deggen tahay inaad u sheegto Hey’adda laanta socdaalka marka faraha iyo sawirka lagaa qaadayo
Balan ka sameyso Wakaalada Socdaalka ee ah in canugaaga sawir iyo faro laga qaado (oo af ingiriis)
Meesha nalaka helo inaga (oo af ingiriis)
Haddii aad badeshid ciwaan­kaaga
Haddii aad rabtid in laguugu soo diro kaarkaaga oggolaanshaha daganaanshaha gurigaaga waxaan u baahannahay ciwaankaaga. Haddii aad guurtay waxaad sheegi kartaa ciwaankaaga cusub marka aad booqatid Wakaalada Socdaalka. Xasuuso in aad noo sheegtid haddii aad qof kale la nooshahay iyo leeyahay ciwaan laga helo.
Goortii kaarka ruqsada daganaanshaha uu diyaar yahay
Haddii lagu sawiray oofaro lagaa qaaday safaarada ama qunsulka guud waxaad ka heleysaa kaarkaaga iyaga. Weydii safaarada ama qunsulka haddii ay adiga kuu soo dirayaan ama haddii ay tahay in aad ka soo qaadatid. Markii aad heshid go'aanka laguugu siinayo oggolaanshaha daganaanshaha waxay qaadan kartaa ilaa afar isbuuc in lagu sameeyo kaarka iyo loo soo dirto safaarada ama qunsulka guud.
Haddii sawir ama faro lagaaga qaaday Wakaalada Socdaalka kaarkaaga ciwaanka guriga ayaa laguugu soo dirayaa todobaad gudahiisa.
Kaarkaaga oggolaanshaha daganaanshaha waxaa la sameynayaa markii go'aanka la sameeyo, laakin kama horeyso sadex bilood ka hor inta aysan bilaaban shaqeynta oggolaanshaha daganaanshaha.
Suurtogal ma ahan in la dadajiyo sameynta ama gaarsiinta kaarka.
Xogta wadata kaarka
Kaarka oggolaanshaha daganaanshaha waxay wadataa macluumaadka ku saabsan nooca ruqsada aad haysatid iyo inta kaarkaaga uu shaqeynayo, ee ka mid ah waxyaabaha kale. Xogtaada gaarka ah sidoo kale waxay ku jirtaa kaarka. Gadaasha qaar kamid ah kaararka waa qoraalka “Loo ogolaaday shaqada” (“Får arbeta”). Tani waa goortii go'aanka aad heshid uusan si toos ah u tilmaamin in aad xaq uleedahay in aad shaqeysid, sida goortii lagu siiyay oggolaanshaha a daganaanshaha joogtada ah. Laakiin waxaa lagaa siiyay ruqsada shaqada Sweden si aad ugu bilowdid, go'aanka wuxuu sheegi doonaa in aad leedahaya oggolaanshaha shaqada, iyo sidaas darteed kaarkaaga uma baahno qoraalka “Loo ogolaaday shaqada” ee gadaasha ah. Carruurta, qoraalka waxaa ku jira (halka ay khuseyso) ka bilow waqtiga ay gaareen 16.
Hubi maclu­u­maadka kaarka ku qoran
Marwalba hubi magaca ku qoran karaka oggolaanshaha daganaanshaha joogtada ah in uu la mid yahay sida magaca baasaboorkaaga. Haddii kaarkaaga uu leeyahay magac qaldan waa in aad booqataa Wakaalada Socdaalka ama safaarada si markaas aad u heshid mid cusub. Horay u qaado baasaboorkaaga.
Haddii aad badeshid magacaaga waxaad marka koowaad u baahantahay in aad la xiriirtid Wakaalada Socdaalka, taas oo masuul ka ah diiwaanka bulshadda, si markaas loo diiwaangeliyo magacaaga. Kadib waa in aad booqataa Wakaalada Socdaalka si markaas loo helo kaarka oggolaanshaha daganaanshaha cusub.
Marka aad safartid
Marka aad safreysid waa inaad tustaa kaarka iyo baasaboorkaaga oo wada socda. Kaarka kaligiis looma isticmaali karo waraaqda aqoonsiga ama waraaqda lagu safro.
Wakhtiga kaarku ansaxaha yahay
Kaarka sharciga deggenaanshaha ee sharciga deggenaanshada joogtada ah wuxuu shaqeeyaa saddex sano, laakiin haddii aad haysato oggolaansho rasmi ah oo ah aad deggen tahay mid ka mid ah wadamada Midowga Yurub, kaarkaaga deggenaanshuhu wuxuu shaqaynayaa shan sano. Muddada ansaxnimada shanta sano ah waxay sidoo kale khuseysaa kaararka sharciyada deggenaanshaha ee la bixiyay ka hor 1 Janaayo 2022.
Mar kasta oo aad hesho kaarka sharciga deggenaanshaha oo cusub ama la dheereeyey waxaad heli doontaa kaarka sharciga deggenaanshaha oo cusub. Marka aad u baahato kaarka sharciga deggenaanshaha ee cusub waa lagu sawiri doonaa oo mar kale ayaa haddan faraha lagaa qaadayaa. Markasta soo qaado kaarkaagii hore ee sharciga deggenaanshaha marka aad u imanayso Hey'adda laanta socdaalka si aad u hesho kaar cusub
Haddii uu kaa lumo kaarka
Haddii uu kaa lumo kaarka oggolaanshaha daganaanshaha, ama haddii la xado, waa in marka koowaad ku wargelisaa midaan booliska. Kadib waa in aad soo booqataa Wakaalada Socdaalka si markaas laguu sawiro oo faro lagaaga qaado kaarka cusub. Qaado koobiga warbixinta booliska ee ay ku siiyeen booliska, midkood marka aad sameysid warbixinta ama markaas kadib oo boosto ahaan.
Haddii aadan helin kaar­kaaga
Aad sugeysay muddo dheer kaarkaaga oggolaanshaha daganaanshaha? Sababta waxay noqon kartaa in kaarka lagu celiyay Wakaalada Socdaalka. Tani waxay dhici kartaa haddii Wakaalada Socdaalka ay haystaan ciwaan qaldan ee adiga ah.
La xiriir Wakaalada Socdaalka haddii aad qabtid wax su'aalo ah oo ku saabsan midaan (oo af ingiriis)